Falanqeyntii Todobaadka: Safarka Madaxweyne C/weli gaas ee Cadaado… – Balcad.com Teyteyleey
Falanqeyntii Todobaadka: Safarka Madaxweyne C/weli gaas ee Cadaado…
Safarka madaxweyne Gaas ee Cadaado ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee loo qaaday dhinaca nabada aniga waxay ilatahay in inta nabada jecel ku amaani doonaan madaxweyne Gaas in uu ka soo baxay balanqaadkii ahaa in dadka iyo dadka soomaaliyeed Nabadeyn teeda uu ka shaqayn doono.
Wuxuu si shaqsi ah u aaminsan yahay wax Nabad lagu waayey colaad laguma helo karo Taasna waxaa Mar khaati ka ah waqtiga uu xilka Madaxweyn puntland hayo waxaa aad u yaraadey dagaalada dhex mara Qabaa’iilada dega puntland. Iyo xukumadiisa.
Waxaa kaloo aan falanqeyn tayda ku muujinayaa in Madaxweyne Gaas Doonayo inuu Taageero wasiirkiisa reer puntland ee waqtigan ah wasiirka Arimaha Gudaha iyo Dib u heshiisiinta Dawlada Faderaalka soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Siciid Juxa markaa waxaa iska cad in Tagida Madaxweyne Gaas ee magaalada cadaado ay Qeyb ka Tahay Dib u heshiinta shacabka soomaaliyeed Gaar ahaan reer Gaalkacayo.
Waxaan falanqeynta ku soo Gaba gabeynaa” maxay ka dhigan tahay Tagida Madaxweyne Gaas Magaalada Cadaado?”. Wuxuu tix galinayaa in la sii wado hishiiskii Taariikhiga ahaa ee lawada xasuusto.
Heshiiskii 1993- ayaa ahaa markii Gen. Max’ed Faarax Caydiid allaha u naxariistee labada Marxuun C/llalahi Yuusuf ay heshiis ku kala saxiixdeen Magaalada Gaalkacyo, heshiiskaas oo dhigayey in si nabadgelyo loogu wada noolaado Magaalada.
Waxaan falanqeyn tayda aan ku soo qaatey Tagida Madaxweyne Gaas magaalada cadaado ku soo Gabababeyayaa wax baden ayey isaga mid yihiin Madaxweyne Gaas iyo Madaxweyne Cabdulaahi yusuf ilaha ha u naxariistee laba duwaba waxay ka bad baadeen isku day dil oo aad khatar u ah oo kooxda alshabaab si weyn u soo Qorsheeyeen.
Maxay tahay khatarta uu qaatey Gaas?
Dr.Cabdiweli Cali Gaas waxa uu ahaa isaga iyo Xaaskiisa Drs. Hodan Siciid Ciise macalimiin wax ka dhiga jaamacadaha Maraykanka, ma ahan shaqo sahlan in shaqadaadi hore laguugu bedelo mid noloshaaduba khatar ku geli karto, waxaa xasuus mudan khatartii uu ku galay isku daygii la doonaayey in lagu khaarijiyo isaga iyo xukuumadiisa Badbaado Qaran taas oo ka dhacdey Tiyaatarka Muqdisho bishii April 2012, taasi
ilaa waqtigaa wali wuxuu doonayaa inuu siyaasada Guul ka gaaro. Madaxweyne Gaas
Waana nin mucaarad badan sida cabdulaahi yusuf uu ahaan jiray mucaaradka madaxweyne Gaas waa kooxa kala Qaybsan oo dangaara ku mucaaradaya.
Madaxweyne Dalka K/Afrika Jacob Zuma oo mooshin laga keenay
Shirweyne ka furmaya Muqdisho